Handong Global University - -Amụ ná Mba Ọzọ na South Korea
tọrọ ntọala : 1995
Echefukwala -atụle Handong Global University
Debanye aha na Handong Global University
Handong Global University anọwo na-edetu a ọhụrụ akụkọ ihe mere eme ebe ọ bụ na ntọala iri abụọ gara aga. Anyị ọhụụ bụ na-egosi ịhụnanya n'ebe ndị agbata obi anyị na ịgbanwe ụwa site Ịnwetacha uru ịrụ ọrụ ma ụmụ akwụkwọ 'na ndị ọkachamara' talent.
HGU ka iche so kpata ọganihu nke Undergraduate mmụta site creatively iji zuru ụwa ọnụ ahụ maka ndị a holistic mmụta na-amalite ma agwa na ihe ọmụma.
Na mgbakwunye, HGU e adọrọ uche ya otutu izi usoro ọmụmụ na Ọganihu narị afọ nke 21 si dị nke mmụta na-edozi nsogbu na a globalized oge.
Competency na-esikwu ike ọ bụghị na ihe ọmụma ndị nnyefe mmụta ekwekọghị ma ọ bụ izi ha n'isi n'isi ma na uru agụmakwụkwọ nke na-eduzi ụmụ akwụkwọ na idozi nsogbu.
HGU na-enyere ụmụ akwụkwọ na-ewu ha competencies site oru ngo dabeere na ọmụmụ na nurtures ọma kwesịrị isi na talent na akpọ ọrụ dị mkpa n'ime ụwa. M ịgbatị m kacha bụrụ ezigbo ekele maka mmasị na nkwado maka HGU.
School of International Studies, Asụsụ, na Literature,
School of Management na Economics,
School of Communication Arts na Sciences,
School of Ndụmọdụ Psychology na Social Welfare,
School of gbasara ohere Environmental System Engineering,
School of ọdịnaya Convergence Design,
School of Computer Sciences na Electronic Engineering,
School of Mechanical na Control Engineering,
The mahadum e hiwere na December 1994. The nchoputa, Song ịgba-Hun, bụ onye nwe a na-ajụ-sized ụlọ ọrụ, ma nye ala na ego iji hiwe a Christian mahadum. Ọ kpọrọ Dr. Kim Young-Gil na-akpa president. Dr. Kim bụ a Christian ndú, na n'oge gara aga na-arụ ọrụ dị ka a nnyocha ọkà mmụta sayensị na NASA na-dị ka a prọfesọ na Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).
The mahadum chere ọtụtụ nsogbu ná mmalite. The nchoputa nke ụlọ ọrụ gara odida mgbe President Kim na ew mbụ ọkachamara na ụmụ akwụkwọ. The mahadum na-zutere obodo mmegide site n'aka Pohang ụmụ amaala na-atụ anya na mahadum na-eje ozi bụ isi Pohang bi. Mgbe ọ bịara mara na mahadum ga-abụ a Christian mahadum, ew ụmụ akwụkwọ si n'ebe niile Korea, ọtụtụ Pohang bi megidere oruru nke mahadum. Nke a mere ka a gbara akwụkwọ, na na otu n'ime ndị a suut, President Kim ama ebubo nke ọ na-eji ọchịchị ego maka nzube nke e eze mma. Enye acquitted na tọhapụrụ ama okodu 56 ụbọchị n'ụlọ mkpọrọ.
N'ihi na ụkọ ego, mahadum chere ọtụtụ ọdụdọ nke odida. President Kim na osoje onyeisi gara chọọchị dị iche iche na zutere Kraịst ma na Korea na ná mba ọzọ na-arịọ maka onyinye. The pastọ nke Onnuri Church (Seoul) ghọrọ onyeisi oche nke Handong University osisi, nke aka hiwe a ogologo mmekọrịta dị n'etiti mmadụ abụọ oru. President Kim onwe ya nyere ya severance akwụ site KAIST. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na-enweghị ụgwọ ruo ọtụtụ ọnwa. Inyocha site Ministry of Education dị ka reformative na-akụziri, Handong merie ọchịchị izi oru ngo, na mahadum na-akpata ego ike iji rụọ ọrụ.[
Na kọmputa ọmụmụ na English ọmụmụ, mahadum ghọrọ-ewu ewu n'etiti recruiters nke nnukwu ụlọ ọrụ. na 2007, Handong University sonyeere University Twinning na ịkparịta ụka n'Ịntanet (UNITWIN) omume, ihe n'uche nke UNESCO. The mahadum a họọrọ dị ka onye "Advanced College Education (Ace)"Alụmdi site Korean Ministry of Education na 2010 na 2011. Ya, e nwekwara nominated dị ka otu n'ime ndị 10 UNAI ehiwe mahadum 2010.
na 2014, Dr. Jang N'isi Nso-Heung e inaugurated dị ka 2nd president nke Handong Global University. Mgbe President Jang chere ụlọ ọrụ, ọ mara ọkwa ọhụrụ bụ isi ebumnobi maka mahadum, gosikwa dị ka "Iri World-Changing Projects,"
Ị chọrọ -atụle Handong Global University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Handong Global University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Handong Global University.